आज साउन १० गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस्….
July 25, 2020 673
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) कुनै पनि वि’वाद वा प्रतिस्पर्धामा अरुभन्दा पछि परिनेछ । मुद्दा मामिला तथा यस्तै क्रियाकलापमा सामेल नहुनु नै राम्रो रहेकोछ । आफन्त तथा कुटुम्ब’सँग मनमुटाब बढ्ने योग रहेकोछ ।
सत्रुहरुले टाउको उठाउन खोज्ने’छन् ध्यान दिनुहोला । व्यापारमा भनेजस्तो आम्दानी नहुने हुनाले दैनिकी प्रभावित हुनेछ । तपाईँको कामबाट अरुले फाइदा लिन खोज्नेछन् । स्वास्थ्यमा’ सामान्य समस्या आई खर्च बढ्नेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) अध्ययनमा प्रशस्त समय दिन सकिनेछ भने नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । तपाईँको इमान्दारिताको कदर सबैले गर्नेछन् । बन्द व्या’पार फस्टाएर जाने हुनाले मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ ।
अप्ठ्यारा तथा असजि’ला परिस्थितिलाई सहजै बुद्धिमता पुर्वक निराकरण गर्न सकिनेछ । प्रेममा सामिप्यता बढ्ने तथा उपाहार प्राप्तीको योग रहेकोछ । सन्तान तथा आफन्तबा’ट सहयोग रहने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) घर परिवार तथा आफन्तहरुमा विभिन्न समस्या देखा पर्नेछ । आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आई औषधि उपचार खर्च बढेर जानेछ । प्रणय सम्बन्धमा ‘सामान्य मन’मुटाब सिर्जना हुनेछ ।
जग्गा सम्बन्धि विवादमा फस्ने योग रहेकोछ भने आन्तरिक धन सम्पतिमा विवाद सिर्जना हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । पढ्ने लेख्ने काममा खासै मन जाने छैन । कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय’बाट भने सन्तोषजनका नाफा कमाउन सकिनेछ ।’
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) व्यापारमा प्रशस्त समय खर्चिए पनि आम्दानी थोरै हुँदा दैनिक कामहरु प्रभावित हुन सक्छन् । छिमेकी तथा दाजुभाइसँग सामान्य कुरामा बिवाद बढ्नेछ भने बाहिरका मानिससँग न्यायिक निर्णयहरुमा सामेल भए हारिने सम्भा’वना रहेकोछ ।
सामाजिक तथा परोपकारी क्षेत्रमा सामेल भए पनि आलोचना गर्नेहरुबो बिगबिगी रहनेछ । प्रेममा धोका हुने हुदा आज’को दिन टाडै बस्नुनै बेस हुनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) असजिलो परिस्थितिहरुलाई बुद्धिमता पुर्वक सहजतामा ढाल्न सकिनेछ । मा’या प्रेमको गाठो कसिलो हुनेछ भने जीवन साथीको सहयोगले उत्पादन मुलक काम गर्न सकिनेछ । पारिवारि सभा समारोहका सहभागि भई मिठो मसि’लो भोजन ग्रहण गर्न अवसर प्राप्त हुनेछ ।
कलाकारित तथा फिल्मी क्षेत्रमा समय लगानि गर्नेहरुलो नाम तथा दाम दुबै कमाउने ग्रहयोग रहेकोछ । कुटुम्बसँग कुनै पनि कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला सामान्य मनमुटाब सिर्जना हुनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) व्यापार’मा समय दिए अनुसार आम्दानि नहुने हुनाले दैनिक काम तथा थप लगानी गर्ने वातावरण बन्ने छैन । अध्ययन अध्यापनमा अल्छी गर्नाले नतिजा अरुतिरनै जानेछ ।
राजनीति तथा सरकारी कामकजमा ढिला शुस्तिको चपेटा’मा परिने योग रहेकोछ । जनताको काम गर्न सक्दा मान सम्मानमा बृद्धि हुने भएपनि काम गर्नको लागि कसैको सहयोग पाईने छैन । आम्दानीको तुलनामा खर्च अधिक बढ्ने हुँदा आर्थिक व्यावस्थापन’ गर्न सहज हुने छैन ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) समयको गतिसँगै बढ्न नसक्दा प्रतिस्पर्धामा अरुभन्दा पछि परिनेछ । तयारि बिना नै महत्वपुर्ण काम शुरु गर्दा बिग्रने छ ध्यान दिनु उचित होला । प्रेम प्रशंगमा रमाउन चाहनेहरुका आजको दिन टाढै रहनु उपयूक्त हुनेछ भने घर परि’वारमा आफन्त सँग मानमुटाव सिर्जना हुनेछ ।
बिदेश यात्राको गतिलो सम्भावना रहेकोछ भने बिदेशि सामानको व्यापार फस्टाएर जानेछ । स्वदेशमा उत्पादित सामानको व्यापार व्याव’सायमा अरुदिन भन्दा अलि बढि समय खर्चिनु पर्नेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) व्यापार व्यावसायमा लगानी गरि आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । दाजुभा’इ तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग हुनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जाने ग्रहयोग रहेकोछ । सवारी साधन तथा अन्य भौतिक सम्पति’हरु लाभ हुनेछ ।
पढाई लेखाईमा सुधार हुने हुनाले अरु भन्दा अगाडि बढ्न सकिनेछ । इच्छा आकांक्षा तथा मनोकामना पुरा हुने समय रहेको छ भने रोकिएका कामहरु बन्ने तथा नयाँ काम गर्ने अवसर’ आउँनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) जानकारिको अभावले कामहरु बिग्रनेछ भने आलोचनाको शिकार होईनेछ । आर्थिक पक्ष कमजोर रहने तथा यहि बेलामा व्यापार व्यावसायमा मन्दि आउनेछ ।
आम्दानी भन्दा खर्च अधिक हुने हुनाले रुपैयाँ पैसाको व्यावस्थापन गर्न गाह्रो पर्नेछ । पढ्ने लेख्ने काममा खासै मन नजादा हरुभन्दा पछि परिनेछ । माया प्रेममा अविश्वास बढ्ने योग रहेकोछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको काम गर्न नसक्दा मान पाउने योग टरेर जानेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) नसोचेको उपलब्धि हासिल हुनेछ भने समयले साथ दिने हुनाले तारिफयोग्ग काम गरि चर्चा बटुल्न सकिनेछ । खोज तथा अनुश’न्धानको क्षेत्रमा थोरै समय लगानि गर्दा पनि राम्रो नतिजा हात लाग्नेछ ।
दाजुभाई तथा आफन्तको सहयोग पाईने हुनाले असजिला कामहरु सहजै सल्टाउन सकिनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढ्ने योग रहेकोछ । लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) कष्ट भावमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले भौतिक सम्पति तथा सवारि साधनको प्रयोग तथा परिचालन गर्दा ख्याल गर्नुहोला । माया प्रेम गर्ने जोडिहरुले आज’को दिन नजिक नहुँदै राम्रो रहनेछ ।
आर्थिक पाटाहरु कमजोर रहनेछन् भने व्यापार व्यावसायमा आम्दानी नहुँदा दैनिकी प्रभावित हुनेछ । दिदी बहिनिहरुसँग मनमुटाब बढ्नेछ भने आफन्त तथा साथिभाईहरु तपाईँदेखि टाडिन सक्छन् ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) व्यावसायिक तथा मनोरञ्जनात्मक यात्रा हुनेछ । व्यापार फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने समय रहेकोछ । पढाइ लेखाइमा अरुदिन भन्दा सुधार भएर जाने तथा नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ ।
पारिवारिक जमघटमा सामेल भई स्वादिष्ट भो’जन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । नया ठाउमा नया नियूक्ति तथा काम गरिरहेको ठाउमा बढोत्तरि हुने योग रहेकोछ । प्रेममा नजिक भई रमाउन सकिनेछ ।।
Prevकिन गरिन्छ नाग पूजा ? किन टासिन्छ नाग ? यस्तो छ ‘नाग महिमा’
Nextमहानायक राजेश हमालले आँशु झार्दै यसरी गरे भाई राकेशको अन्तिम विदाई (भिडियो सहित)
नेपाल पैसा पठाउँदा युएईमा एक नेपालिले पाए १ के.जि सुन उपहार
श्रीमान‍्लाई भीरबाट मिल्काएर श्रीमान बेपत्ता भएको भन्दै गरिन् गाउँमा रुवा’बासी
नेपालमा आज कोरोनाबाट १० जनाको मृ’त्यु , यी जिल्लाका हुन् मृत’क
रबि लामिछानेको पोस्टबारे तिखो टिप्पणी गरेकी धमला पत्नी एलिजाले अन्तत मागिन् माफी (भिडियो)
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (110311)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (109197)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (92278)
सुन्दर युवती र नेपाल आर्मीका सिपाहीको यो भाईरल भिडियो लाखौंले हेरे (भिडियो सहित) (91144)
बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) (85432)
फिल्मी हिरो हिरोइनलाई टक्कर दिने नेपाल प्रहरीको यो डान्स (हे`र्नुहोस् भिडियो) (80365)
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (78377)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (78129)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (72482)
स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (69932)
सुन भन्दै ठगी गर्न खोज्ने पाँच जना पक्राउ
सामाजिक सञ्जालमा ‘संसारबाट बिदा लिने समय भयो’’ भन्दै म्यासेज लेखेर युवक बेपत्ता
काठमाण्डौमा बालेनले जिते गहना किन्दा छुट अफर !
फेरि लिटरमै १० रुपैयाँ बढ्यो पेट्रोलको भाउ, ग्यासको भाउ पनि बढ्यो